Markabkii hubka iyo inta wax qabatka jecel
Marka hore waxaan salaamayaa shacabweynaha somaliland meel kasto ay jogaan , waxa baryahan la isla dhexmarayay in uu ku soo xidhay degada berbera markab alaab u siday ganacsato reer somaliland,ah markii rarka laga dajiyay ay ku arkeen ciidanka bada somaliland iyo shaqalaha maalintaa hayey shaqada dhowr gaadiidka dagaalka ee qafilan ah iyo tobanaan qori iyo rasaas farabadan. sidayno lawada socono golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sanadkii 1992 somalia ku soo rogay cunaqabateyn dhanka hubka ah .
Hebel Hebel, Wuxu Ku Dhawaaqay In Uu U Sharaxanyahay Doorashada Baarlamaanka Somaliland. Waxaad Moodaa, Shacab, Xukuumad Iyo Xisbiyaba In Wax Weyn Inaga Khaldanyihiin
Waxaan maanta qalinka u qaatay arrin cajiib ah oo ayaamahan danbe ku soo badanayay bulshada reer Somaliland dhexdooda, arrintaas oo ah sida aad la socotaan ayaamahan danbe waxa warbaahinta reer Somaliland sida Website-yada iyo TV-yada ku soo badanayay shiqsiyaad ku dhawaaqaya in ay u sharaxan yihiin Doorashada Baarlamaanka ee fooda inagu soo haysa.
Dadka ku dhawaaqaya in ay doorashada baarlamaanka u sharaxanyihiin aad bay u soo badanayaan maalinba maalinta ka danbaysa.Hadaba, waxaan jeclahay in aan u daadago dulucda maqaalkayga, muwaadin kast oo reer Somaliland ah xaq buu u leeyahay mansab kasta oo siyaasadeed in uu isu sharaxo, balse is-sharaxaadiisu waa in ay waafaqsantahay Dastuurka Qaranka Somaliland iyo Xisbiga uu iska sharaxayo Dastuurkiisa.
Waxa aad arkaysaa muwaadin rag iyo dumar kuu doono ha ahaadee inta uu Hotel-weyn kiraysto dad isugu keenaya, kagana dhawaaqaya in uu u sharaxanyahay Doorashada Baarlamaanka. Hadaba su’aashu waxa weeye muwaadinkan yaa siiyay ogolaanshaha uu isku sharaxayo? Illeen Dastuurka Somaliland wuxu sheegayaa in cidda qudha ee wax sharaxi kartaa ay tahay Xisbiyada Qaranka Somaliland, xataa haduu yidhaahdo xisbi hebel baan ka sharaxanahay, ku dhawaaqistiisu waa sharci daro, sababtoo ah dee 3da Xisbi Qaran ee kala ah UCID, WADANI IYO KULMIYE wali liiskii musharaxiinta kuraasta Baarlamaanka may u gudbin Kominshinka Doorashooyinka Somaliland, iskabadaa liise, Doorashadii Baarlamaanka ayaa xataa qudheeda meel laysla dhigin waqtiga ay qabsoomayso.
Waxa kale oo cajiib ah oo iyadana aad dareemaysaa in Bulshadeena reer Somaliland ay wax ka qaldanyihiin, waxaad arkaysaa Afar koofiyad bacle iyo mid yar oo xooga lacag ah sita oo inta ay qol madow isla galaan warbaahinta ka oranaya hadaanu nahay beesha reer Qansax waxa noo sharaxan doorashada Baarlamaanka Hebel, taas oo ay meel uga dhacayaan Dastuurka Qaranka iyo Muwaadiniinta damaca leh ee Beeshaa. Sababtoo ah Dastuurkeenu wuxu sheegayaa in Xisbiyadu ay yihiin kuwa wax soo sharaxaya, Dastuurka meelna kagama qorna Beel wax soo sharaxaysa, maxaynu nidaamka xisbiyada badan u samaysanay hadii Beeluhu wax soo sharaxayaan, waxaad moodaa halkii aynu qabyaalada ka kori lahayn in aynu dib ugu noqonay, waxana u sabab ah hogaan xumada xaga siyaasada inaga haysata.
Run ahaantii Shacabka reer Somaliland waa dad wanaagsan oo duntoodu ay wacan tahay , balse nasiib daro waxa ay inkaari kaga dhacday xaga Hogaamiyayaasha Siyaasadda, anigoo kala saarayn mucaarad iyo muxaafidba, sababtoo ah kan maanta mucaaradka ahi waa kii shalay xilka hayay, ka maanta muxaafidka ahina waa kii shalay mucaaradka ahaa, markaa waa dameer iyo labadiisa dhagood.
Arrinta ugu weyn ee markaa aan doonayaa in aan shacabka reer Somaliland dareensiiyaa waxa weeye dadkan aad arkaysaan ee Durbaanada Sharcidarada iska tumanaya ee leh Baarlamaan baanu u sharaxanahay. Miyaad garanaysaan Waxa ay Baarlamaannimada u doonayaan ama tirada intaa la’egi ay iskugu soo sharaxeen kuraasta Baarlamaanka?.
Aniga shiqsiyan marka aan qiyaaso fikirkayga shaqsiga ah, waxa ay iilla muuqdaan badankoodu ama 98% dad aan kursigan u doonanayn in ay dadkooda wax ugu qabtaan, balse arrintoodu ay tahay in ay ku danaystaan oo lacag ku gurtaan sida kuwa iminka inoo fadhiya ee mooshin quutayaasha la yidhaahdo. Waayo shacabku wuxu siyaasadda ugu soo wada cararayaa waxa ay arkeen, Siyaasiyiinta maanta xilalka haya oo ka taajiray dhiiga umadooda.
Hadaba waxaan hadalkayga ku soo gaba-gabaynayaa, war waxbaa inaga qaldan hadaynu nahay shacab iyo xukuumada iyo xisbiyaba, eeda ugu weyna waxa iska leh Siyaasiyiinta qarnigan jooga oo ku fashilmay in ay umadooda u jaheeyaan dhinaca saxan, waxa aad arkaysaan ee nidaam xumada dowladeed, musuqmaasuqa iyo qabyaaladan xadhkaha goosatay waxa ka masuul ah Siyaasiyiinta reer Somaliland mucaarad iyo muxaafidba, waxa la joogaa wakhtigii shacabka reer Somaliland ay ka fakiri lahaayeen in ay helaan Siyaasiyiin Wanaagsan oo wadaniyiin ah oo umadooda u damqanaya, Shacabka reer Somaliland waxaan leeyahay ha niyad jabina dadaalka halkaa ka sii wada maalin uun baad heli doontaan hogaamiyayaal xalaal cun ah oo shacabkooda u danqanaya Insha Allaah.
Maxaa dan ah, maxaa daran?.
Siday ku dhaanteeyaan, habar jeclo la ogaayoo ashahaadeedu waa aabahay goblan iyo shir beeleed, Garxajis iyo qaar kale oo badan garaadkoodu wuu dhaafsiisanayahay Xaajo goboleed.
Arabna shareecda islaamka ayuu ka anba qaadaaye, Awl wuu daba shabeelaysanaya daa’im abidkii, Samaroon baqa maal iyo madaxweyne ku xigeen magac u yaal ah ka amar weynaa, Sanaag iyo Sool abtirsimadoodu waxay gashaa odaygii darood. In la bedelana diyaar umma aha.
Intaas oo halbaas aha ayaa is hareer taal, Somaliland gudaheeda. Kooxo magaca Somaliland ku malafsada, oo beel walba ka soo jeeda, waynu haynaa. Waji ku macaasha waynu haynaa.
Aqoon yahan, broffisaro sacab doon ah, oo runta afka ka dhawra waa muush. Jaahil xildoon ah waynu haynaa. Laakiin ma hayno Qarnimo Somaliland iyo ictiraaf midna.
Diin god gal, god goray gal, goray god gal, god diin gal, iska daba wareegii Gaariye ka qayliyey, waynu haynaa. Xisbiyo magac u yaal ah waynu haynaa, oo waa KULMIYE god gal, god UDUB gal, wax isdoorshe may dhicin. Waxaynu ku muranaa , UCID god geli doonee, god KULMIYE geli doonee, WADANI god gal, god KULMIY geli doonee, iska daba wareeg.Bal hadaba soo in la isweydiiyo ma ah, horta maxaa dan ah, maxaa daran?
La-taliyaha Siilanyo Cabdifataax Tol iyo Xidid midna kama xishoon
Waxaan dhegeystay Lataliayaha Madaxweynha ee Hay’adaha Cabdifataax oo ah nin cayda iyo aflagaadada ku macaasha oo tu xisbi iyo mid reerba arrinkiis yahay cay ku macaash. Waxaynu ogayn intaanu xilkan qaban siduu u caayi jiray xukuumadda Siilanyo. Waxaynu ogayn doorkuu ku lahaa dawladdi UDUB ee iyadoo doorashadu maalmo ka hadhay ku wacad furay Riyaale.
WAxa xigtay inuu kolkuu mansab ka waayey Siilaanyo uu Tvga la soo fadhiistay cay iyo xumaan uu ku duray in Siilanyo yahay Somaliweyn. WAxa xigtay inay is arkeen dumar u dhow Marwada Madaxweynha deedna la yidhi reerka Nuux Ismaaciil warbaahintooda cid u jawaabta ayaa la rabaa ee ku dhaqaaq.
Waxuu u biyeystay inuu si toos ah u abaaro oo uu gole weyn ka aflagaadeeyo Haatuf iyo Yuusuf Cabdi Gaboobe. Iyadoon wig ka soo wareegin ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay Lataliyaha Madaxweyne ee Hayadaha Caalamiga ah. Waa nin si toos ah 7u hoos taga Marwada iyo koox haweeyn ah oo ay isku jilib yihiin.
Haddaba ayaan dhoweyd waxuu u biyeystay inuu wax ka sheego reer Awdal oo uu yidhaahda anaa xaal ka bixiyey. Ceeb looma dhjinto. Xaalka waxa bixiya cid ka tirsan cidda uu xaalka ka bixinaayo. Haddaba Cabdifataax miyaanu asal lahayn illeyn kolkuu reer Awdal la xididay waxuu sheegtay reer Hargeysa iyo reer magic weyn. Ma aha reer Samaroon reeraha xididnimo wax ku qarameeya. Reerka waa ku ceeb inaad xaal ka bixiso beesha dhan eed la xididka tahay. Sidoo kale waa ku ceeb inaad reerka aad ka soo jeedo kol dhaqanto kolba cid aad isku dhejiso.
Waxa iyana xigtay sidaad shalayto u lahayd Siilaanyo waa Soomaliweyn aad maantana ku bilowday Cabdirahmaan Cirro waa Soomalilweyn. Ciyaartaas hore ayaad u dheeshay ee jiib mid kale.
WAxa ayaan darro ah in raga caynkan ihi mansab ay u hayaan dawladda. Waa ceeb iyo foolxumo, waana tan keentay in dadku dhagaha ka fureystaan xukuumaddaa aan baal lahayn ee sida foosha xun u isticmaasha una duleysa dhuuni raacyada aan mabda lahyn ee kolba meesha loo tilmaamo duqaynaaya. Waa waxa dadka ka eryey.
Madaxweyne hoos u eeg dumarka hoggaanka kuu haya oo iska xoreey xakamaha ay kugu xidheen, Marwadana waxaan leeyahay hooyo qaran ayaad tahay ee ilaali magaca Madaxweynha, ka ilaali kuwa ka shaqaysta oon huba inay dhawaan ka guuri kolkay arkaan inuu liito. Ragii isagoo mucaarid ah la safnaa raadi, kuwaad ayuu u baahan yahay. Waa kuwii guusha aad haysataan soo hooyey. Abaal ayey idinku leeyihiin.
Kolka aad xukunka hayso cay iyo aflagaado wax yeelo ayuunbay kuu leedahay ee cid ummadda la hadli karta meesha keeni, Cabdifataax, Mingiste,iyo Qabe ummad ma hortegi karaan.
Noolow Madaxweyne, Allena xaqqa ha ku tuso.
Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland oo la filaayo inuu saaka ka soo dego Madaarka Hargeysa
Gudoomiyaha Golaha wakiilada Somaliland,ahna gudoomiyaha xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo muddo laba todobaada safar khaasa ku joogay dalka imaraadka carabta UAE) ayaa saaka ku soo fool leh dalka.
Guddoomiya Cabdiraxmaan Cirro ayaa xoggo Qarannews heshay tibaxayaan in mudadii uu dalka Imaraadka Carabta ku sugnaa kulamo iyo Fadhiyo la yeeshay masuuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan Jaamacada Carabta iyo dalka Imaraadkaba,Wuxuu kaloo munaasibado iyo kulamo isdabajooga la qaatey jaaliyada reer Somaliland ee dalka Imaraadka carabta iyo weliba Xisbiyahanada iyo taageerayaasha xisbiga Waddani ee degan dalka UAE.
Gudoomiye Cirro ayaa markuu tegay Dalka UAE loo sameeyay Munaasibad weyn oo soo dhaweyna oo reer Somaliland oo dhami iska wada dhex arkeen halka sagootintiisiina munaasibad taas la mid ah loogu sameeyay DUBAI.
Gudoomiye Cirro ayaa lagu wadaa inuu saaka subaxnimada ka soo dego Madaarka Hargeysa.
Xisbiga Wadani Bristol oo hadhimo sharfeed iyo Madal Bilicsan ku Sogootiyey Waftigii G/xigeenka Xisbiga Wadani + Sawiro.
Munaasibad aad u balaadhan iyo hadhimo sharafeed ay ka qeyb galeen haldoorka Xisbiga Wadani bristol, odayaal, waxgarad, aqoonyahano iyo tageerayaasha Xisbiga wadani ee UK ayaa lagu qabtay Xalay magaalada bristol, Uk.
Xafladaas oo lagu maamusay sogootinta Waftiga Gudoomiye Ku xigeenka Xisbiga wadani Ahmed Muumin Seed iyo Agaasimaha Xarunta Dhexe ee Wadani Marwo yaasimin raygal ayaa waxa kala qeyb galay Hogaanka Sare ee Xisbiga wadani ee Uk iyo Madaxda Laamaha Xisbiga ee Wadani ee Shifield, Brimingham, Bristol, South london, east london, Milton keynes iyo Conventry.
Xalfadan ayaa sidoo kale lagu soo dhaweeyey tageerayaal aad u badan oo ka soo digorogtay Xisbiga Kulmiye oo halkaas ka dhawaajiyey inay hiil iyo hooba garab u yihiin xisbiga wadani doorashooyinka soo socoda.
Sidoo kale waxa gudoomiye lagu doortay Xisbiga wadani laantiisa bristol Abdullahi abdi cige oo dhawaan xisbiga ku soo biiray. Ugu danbeyntii, waxa halkaas hadalo ka jeediyey madaxda kale duwan ee xisbiga wadani ee Uk iyo heer qaran waxayna madashaas bilicsan ku soo afmeerantay faraxad iyo rayn rayn.
Hoos u Dhaca Qiimaha Shidaalka iyo Sida aanay Waxba Isaga Bedelin Nolashii Shacabka Somaliland
Hoos u Dhaca Qiimaha Shidaalka iyo Sida aanay Waxba Isaga Bedelin Nolashii Shacabka SomalilandWaxa weli sii socda hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee seyladaha aduunka,marka laga soo bilaabo bishii June ee sanadii 2014 maalinba maalinta ka danbaysa hoos ayuu u sii socday qiimaha lagu iibasado saliidu.
Dunida aynu maanta ku noolahay inta badan waxa halbeeg looga dhigaa kor u kaca nolosha dadka ama hoos u dhaceeda arimaha la xidhiidha kolba halka uu marayo sixirka lagu helayo baahida tamarta oo iyadu halbawle u ah wax soo saarka bani aadamku u baahan yahay.
Si kasta oo ay wax u dhaceenba maanta foostadii shidaalka ahayd ee suuqyada dunida waxa ka dhacay qiime dhan qiyaastii kala badh(50%) wax kastaana qiimihii lagu iibsanayay wadankeena halkii buu taagan yahay,waxna kama dhicin.Hadaba wax su’aal ah maxaa arintan hoos loogu eegi la’yahay oo dadka loogu daawanayaa ganacsatada iyagu gabay dareenkii naxariiseed ee ay bulshada kaga dhimi lahaayeen qiimayaashooda ugu sar go’an xiliyadii korodhka qiimaha shidaalka oo hadii senti ku kordho ay iyaguna dadka saarayeen.Waxa shaki la’aan ah in doorkii dawladu meesha ka maqan yahay,sidoo kalena dareenkii mujtamacu dhintay oo aanu waxba diidi karayn,sida aynu la wada socono hadii maanta qiimaha shidaalku kordho ganacsatada oo ay u hadalyso dawladu ayaa dalbanaya in qiimaha la kordhiyo wuxuu doono ha noqdee,tusaale ahaan qiimaha gaadiidka daweynaha qiyaastii sadex jeer ayaa la kordhiyey marka laga soo bilaabo sanadii 2007 iyadoo lagu andocooday qiimo korodhka shidaalka,waakaalada biyaha ayaa iyaduna samaysay qiimo korodh dhan 2000 sh sl mtr kiyuubkiiba ka dib markii ay sheegeen in qiimaha shidaalku kacay,wershedaha laydhka ayaa iyagina 1.20 $ gaadhsiiyey qiimaha iibka yunitkii,maceeshada kale hadalkeeda daa,waana arinta u baahan in qiimayn iyo lafo gur ay ku sameeyaan dadka dhaqaalaha bartay.
Cuquubo iyo dulmi ayaa inagaga socda danyartii wadanka ku noolayd oo aan haysan cid u hadasha oo ka rida dhibta ka haysata nolol bararka maaliba maalinta ka danbaysa cirka isku sii shareeraya arintan oo sabab u noqon karta in wadanka la naco umaduna mar kale ku dhacdo gacan cadow oo aan u naxayn meesha doonto ha ka timaadee.
Waxan u soo jeedinayaa culimada in maalmahan soo socda ay masaajidada kaga hadlaan naxariis darada ka jirta ganacsiga wadanka somaliland ee umadii lagu dhibaataynayo,hadii markaa waanadaasi waxba tari weydo waa in shacabku hadlaa isla markaana ay khasab ku soo dejiyaan qiimaha maceeshada ee xadhkaha goostay noocuu doono ha noqdee.
Warbaahinta waxan u soo jeedinayaa inay iska daayaan waxyaabaha aan dalka iyo dadku midna dantu ugu jirin ee ay qalinka u qaataan sidii ay tooshka ugu ifin lahaayeen dhibaatada lagu hayo bulashada ay ka midka yihiin,waayo arinkan maceeshadu waa mid qof walba meeshiisa ku taabtay.
Xukuumada iyo Goloyaasha kale ee Qaranka waa inay fadhiga ka kacaan oo labadan bilood ee soo socda weerar aan kala joogsi lahayn ku qaadaan cida mujtamicii ay masuuliyada ilaahay hortii ugu qaadeen bakhtigooda ka kacday,isla markaana ganacsatada lagu khasbaa inay soo celiyaan qiimaha dalacan ee adeegyada ay bulshada u hayaan.
Siyaasiyiinta iyagana waxa la gudboon inay halgankan lagu dhimayo sixirka maciishada kaalin muuqata ka qaataan,siyaasigu wuxuu wax ka doonayaa waa shacabka oo codka u haya,hadii shacabkii la gumaado yaa ku siinaya cod aad xukunka ku fuushid ama ku sii joogtid,waar dadka hoos u eega doorasho ha la qabto iyo ha la kordhiyo walaahi baanay meel idiin gaadhsiinayn,runta u soo noqda.Waxan ku soo khatimayaa hadalkayga meerisyo ka mid ah maansooyinkii laga dhaxlay abwaan(Gaariye) IHN.
wargeys u ah caydha
Daawo:Prof.Axmed Ismaaciil Samatar oo Ardayda Jaamacada Eelo-Boorama u jeediyey Mawduuc ku saabsan Dawladnimada & waxay tahay
Prof.Axmed Ismaaciil Samatar ayaa Ardayda Jaamacada Eelo-Boorama u jeediyey Mawduuc ku saabsan Dawladnimada & waxay tahay
Maxaad Ka Og Tahay Qorshayaal UGUB Ku ah Siyaasadda iyo Dhaqanka oo ah Hanti Boob Kii ugu Khatarsanaa oo Xukuumada Siilaanyo La Soo Baxday?
Xukuumad kasta oo dalka soo martaa waxay dalka, kaga tagtaa taariikh u noqota mid umadu ka dhaxasho,taasi oo noqota mid madaw ama mid dahabi ah,hadaba aniga oo xog ogaal u ah,wax badan oo dalka ka socda ayaan is idhaahdaa waxba ha qori oo qalinka ha u qaadan,markaasaan mar marka qaar adkaysan kari waayaa musuqa iyo hanta boobka dalka ka socda baaxada uu leeg yahay oo balaadhan awgeed.
Akhriste inkasta oo qof kasta uu wixii uu ilahay u qoray aysan seegin,hadana waxa jira wax umadda ka dhaxeeya oo ay wada leedahya oo hadii cadaalad wax loogu qaybiyo ay umadda wada gaadhayso,hadii se cadaalad daro wax lagu cuno,sida ay wax kasta u kharimayaan,hadaba waxaan qalinka u qaatay aniga oo soo ogaaday qaabab badan oo xukuumadda siilaanyo u lunsato hantida umadda isla markaana qaraabo u kiil ugu samayso,qaababkaasi cusub waxa ka mid ah.
1: shir balaadhan oo ay yeesheen gudida horumarinta beesha madaxweyne siilaanyo ayaa laga soo saaray go’aamo cusub,kuwaasi oo kala ahaa.
A: in dhamaan dhalinyarada beesha kuwa lagu tuhmayo aqoonta sare in loo dhiso guryo,iyadoo weliba inta hadaba loo bilaabay in guryo loo dhiso qaarna loo iibiyo,qorshahaasi hada waa mid socda ooh ore u bilaamay.
B: in dhalinyarada kuwa haysta gaancsiga kooban laga taageero wax kasta oo ay u baahdaan oo loo fududeeyo ,la soo tegida gaancsiga oo weliba cashuurta laga dhaafo marka ay dekeda kala soo degayaan.
C: dhinaca shaqaalaha xooga la saaro oo goob kasta la geeyo shaqaale reerka ah,isla markaana masuuliyiinta goobhaasi la faro inay deg deg mushahar iyo gunaba u qoraan.
Akhriste qorshayaashani waxay ka mid yihiin kuwii shir dhawaan gudida beesha oo ay ka mid yihiin wasiirada awooda badan ee beesha madaxweyne siilaanyo gaadheen,isla markaana waxaan qalinka u qaatay oo kaliya qorshayaasha cusub ee dhaqan xumada ah,ee hantida umada lagu boobayo in aan umadda us oo bandhigo,inkasta oo horeba musuq maasuqa iyo boobka hantida umadu ay la soo bilaaman tahay markii siilaanyo dalka xukunkiisa la wareegay.
La soco xogo kale oo umada aan u soo bandhigo